Umshini Wokumaka Ibhokisi Eliqinile Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Umshini Wokumaka Ibhokisi Oqinile
Umshini webhokisi lesipho, ibhokisi lokupakisha, amabhokisi enziwe ngomshini womshini womshini womshini, olahlwayo uyaqaphela ukwakheka okwenziwe, indlebe eligoqiwe, ukususwa kwamagwebu nokubunjwa nokugoqwa nokuqhubeka kokusebenza, kungonga isikhathi nesikhathi nokwenziwa, kuthuthukise ngempumelelo umkhiqizo isivuno senza umkhiqizo wokuzikhethela wokukhiqiza ibhokisi lokupakisha lebhizinisi.
Okuzenzakalelayo ekhoneni wokunamathisela umshini
Umshini usetshenziselwa izinhlangothi ezine ukubekwa okuzenzakalelayo kwekona. Kusetshenziswa ikakhulu emabhokisini omakhalekhukhwini, amabhokisi ezipho, amabhokisi obucwebe, amabhokisi ezimpahla, amabhokisi ezicathulo, amabhokisi ezimonyo namanye amabhokisi. Uhlelo olugcwele lwe-servo nesibonisi somshini womuntu sinquma ukunemba, ukuphakama, ukufakwa nokusebenza kwedizayini eyenziwe ngabantu.
Umshini wokunamathisela okuzenzakalelayo
I-N-650A (850A) Umshini wokunamathisela we-aulomatic feeder onomsebenzi wephepha lokuphakelayo lokuzenzekelayo nokunamathisela, nge-conlroller yokushisa okuzenzakalelayo nama-limer wamahora angama-24.
Ngesandla Esiqinile ibhokisi lokugoqa Umshini
238 uchungechunge othomathikhi onqenqemeni bubble cindezela ukuthuthukiswa nokukhiqizwa kwenkampani yethu okusha kwemishini yokwenza ibhokisi lomhlaba omusha, isizukulwane sesibili, isenzo somshini wonke nokwenza ubuhle bokubukeka, uhlobo lwebhokisi losayizi lungasetshenziswa ebangeni elibanzi.